Incwadi eyingqophamlando isiyatholakala ezindaweni eziningi.
Ukuvamisa Imithetho Yokubhala Nobhalomagama LwesiZulu Lonyaka wezi-2021 - IsiZulu Standardisation, Spelling Rules and Orthography – yingqophamlando yencwadi ngezindlela zobhalomagama, ukuhunyushwa, ukutolikwa namatemu esiZulu eyethulwe Yihhovisi LeNyuvesi LokuHlelwa noKuthuthukiswa Kolimi (i-ULPDO) ne-Pan South African Language Board (i-PanSALB) enkundleni yokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje i-Zoom.
Ekhuluma emcimbini wokwethulwa kwencwadi, iPhini Sekela-Shansela leZokufundisa noKufunda uSolwazi Sandile Songca uthe ulimi luyisikhali esibalulekile esihambisana nobuzwe. ‘Lomsebenzi welekelela isinqumo seNyuvesi sokwenza isiZulu ulimi olusezingeni lezifundiswa ngokuphelele,’ kusho yena.
Ihlelwe nguSolwazi ohlonishwe yi-UKZN noyilungu le-IsiZulu National Language Body (IsiZulu NLB) uSolwazi Mandla Maphumulo, onoxhaxha lwezincwadi ezishicilelwe kanti lencwadi entsha inezahluko ngemithetho yesipelingi nobhalomagama, izimpawu zokubhala, ifonetiki, ukufelebisa, amagama ezindawo, ukuhlela nokulungisa okuhleliwe
Lencwadi ibheka izinkinga zokusetshenziswa kolimi ezikhona emithonjeni yezindaba, ikakhulukazi amagama esiZulu adidaniswa namanye amagama nokusetshenziswa kwamagama abolekiwe esikhundleni sokusebenzisa amagama akhona. Ezihlokweni kukhona umlando nokwenziwa kwemithetho yesipelingi samagama nobhalomagama lwesiZulu neqhaza lezifundiswa zesiZulu nabafafazikholo ekubhalweni kwesiZulu.
Lencwadi iqhubeka ichaze izindlela zokubhalwa kwamatemu amasha nemithetho yokuhumusha, ukutolika nokubhalwa kwezichazamazwi.
Isikhulu Esiphezulu Esibambile e-PanSALB uMnu Xolisa Tshongolo ugcizelele iqhaza lolimi ekubuyisaneni kwesizwe. ‘Ulimi luyimpilo,’ kusho yena.
USongca, onguSihlalo weBhodi Yolimi ENyuvesi, ubonge bonke abaphose esivivaneni ekubhaleni Ukuvamisa Imithetho Yokubhala Nobhalomagama LwesiZulu Lonyaka wezi-2021, ushicilelo olubuyekeziwe.
Umphathihlelo noMqondisi Obambile e-ULPDO uDkt uLolie Makhubu-Badenhorst uthe ukwethulwa kwencwadi kuqondane nokugujwa KoSuku Lolimi Lwebele Emhlabeni (i-IMLD), ebinendikimba ethi: Fostering multilingualism for inclusion in education and society.
Izethameli enkundleni yokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje zizitike ngedili lezinkondlo zembongi uNks uNokulunga Majola, odume ngeleNyosi kaMajola.
Lencwadi iyatholakala kubashicileli i-UKZN Press, ezitolo zezincwadi nase-PanSALB.